February 2019 – Dhammadīpa
Posted on 23 Feb 2019 by Ashin Sopāka
“Bhikkhus, if someone were to give awayahundred pots of food as charity in the morning,ahundred pots of food as charity at noon, andahundred pots of food as charity in the evening, and if someone else were to developamind of lovingkindness even for the time it takes to pullacow’s udder, either in the morning, at noon, or in the evening, this would be more fruitful than the former.” – SN 20.4
“Yo, bhikkhave, pubbaṇhasamayaṁ okkhāsataṁ dānaṁ dadeyya, yo majjhanhikasamayaṁ okkhāsataṁ dānaṁ dadeyya, yo sāyanhasamayaṁ okkhāsataṁ dānaṁ dadeyya, yo vā pubbaṇhasamayaṁ antamaso gadduhanamattampi mettacittaṁ bhāveyya, yo vā majjhanhikasamayaṁ antamaso gadduhanamattampi mettacittaṁ bhāveyya, yo vā sāyanhasamayaṁ antamaso gadduhanamattampi mettacittaṁ bhāveyya, idaṁ tato mahapphalataraṁ.”
ရဟန်းတို့ အကြင်သူသည် နံနက်တစ်ကြိမ် နေ့လည်တစ်ကြိမ် ညနေ တစ်ကြိမ် မွန်မြတ်သော ဘောဇဉ်တို့ဖြင့် ပြည့်သော ထမင်းအိုးတစ်ရာဖြင့် အလှူကို ပေးလှူရာ၏၊ အကြင် သူသည်ကား နံနက်အခါ၌ဖြစ်စေ, နေ့လည်အခါ၌ဖြစ်စေ, ညနေအခါ၌ဖြစ်စေ အယုတ်သဖြင့် နွားနို့တစ်ညှစ် ခန့် ကာလမျှလည်း မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများရာ၏၊ ဤနွားနို့တစ်ညှစ်ခန့်မျှ မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများခြင်း သည် ထိုအလှူသုံးကြိမ်ထက် အထူးသဖြင့် အကျိုးကြီး၏။
“Này các Tỷ-kheo, ai vào buổi sáng bố thí một trăm cái nồi, ai buổi trưa bố thí một trăm cái nồi, hay ai buổi chiều bố thí một trăm cái nồi, và ai buổi sáng chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải thoát, hay ai buổi trưa chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải thoát, hay ai buổi chiều chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải thoát, sự việc này đối với sự việc trước, quả có lớn hơn.”
Tũn Meets Cows
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, loving kindness, metta
Posted on 16 Feb 2019 by Ashin Sopāka
“Not the wrong of others, or what
others have done or have not done
one should consider, but what has
been done and not done by oneself.” Dhp 50
“Na paresaṁ vilomāni,
na paresaṁ katākataṁ
attano va avekkheyya,
katāni akatāni ca.”
သူတစ်ပါးတို့၏ မလျော်သော အပြစ်အနာအဆာတို့ကို မကြည့်ရှုရာ၊ သူတစ်ပါးတို့၏ ကောင်းမှု မကောင်းမှု ပြု မပြုကို မကြည့်ရှုရာ၊ မိမိ၏ ကောင်းမှု မကောင်းမှု ပြု မပြုကိုသာလျှင် ကြည့်ရှုရာ၏။
Air Plant, Cathedral Bells, Life Plant, Miracle Leaf, Goethe Plant
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, kamma, self-reflection
Teaching and Practicing Dhamma
Posted on9Feb 2019 by Ashin Sopāka
“If, friend,abhikkhu teaches the Dhamma for the purpose of revulsion towards birth … existence … clinging … craving … feeling … contact … the six sense bases … name-and-form … consciousness … volitional formations … ignorance, for its fading away and cessation, he can be calledabhikkhu who isaspeaker on the Dhamma. Ifabhikkhu is practising for the purpose of revulsion towards ignorance, for its fading away and cessation, he can be calledabhikkhu who is practising in accordance with the Dhamma. If through revulsion towards ignorance, through its fading away and cessation,abhikkhu is liberated by nonclinging, he can be calledabhikkhu who has attained Nibbana in this very life.” – SN 12.67
“‘Jarāmaraṇassa ce, āvuso, bhikkhu nibbidāya virāgāya nirodhāya dhammaṁ deseti, dhammakathiko bhikkhūti alaṁvacanāya. Jarāmaraṇassa ce, āvuso, bhikkhu nibbidāya virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti, dhammānudhammappaṭipanno bhikkhūti alaṁvacanāya. Jarāmaraṇassa ce, āvuso, bhikkhu nibbidā virāgā nirodhā anupādā vimutto hoti, diṭṭhadhammanibbānappatto bhikkhūti alaṁvacanāya. Jātiyā ce … bhavassa ce … upādānassa ce … taṇhāya ce … vedanāya ce … phassassa ce … saḷāyatanassa ce … nāmarūpassa ce … viññāṇassa ce … saṅkhārānañce … avijjāya ce, āvuso, bhikkhu nibbidāya virāgāya nirodhāya dhammaṁ deseti, dhammakathiko bhikkhūti alaṁvacanāya. Avijjāya ce, āvuso, bhikkhu nibbidāya virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti, dhammānudhammappaṭipanno bhikkhūti alaṁvacanāya. Avijjāya ce, āvuso, bhikkhu nibbidā virāgā nirodhā anupādā vimutto hoti, diṭṭhadhammanibbānappatto bhikkhūti alaṁvacanāyā’”ti.
ငါ့သျှင်သာရိပုတ္တရာ ရဟန်းသည် အကယ်၍ ဇရာမရဏကို ငြီးငွေ့ခြင်းငှါ တပ်ခြင်းကင်းခြင်းငှါ ချုပ်ခြင်းငှါ တရားဟောခဲ့မူ “ဓမ္မကထိကရဟန်း”ဟူ၍ ဆိုထိုက်၏၊ ငါ့သျှင်သာရိပုတ္တရာ ရဟန်းသည် ဇရာ မရဏကို ငြီးငွေ့ခြင်းငှါ တပ်ခြင်း ကင်းခြင်းငှါ ချုပ်ခြင်းငှါ ကျင့်ခဲ့မူ “တရားအား လျော်သော အကျင့်ကို ကျင့်သော ရဟန်း”ဟူ၍ ဆိုထိုက်၏။ ငါ့သျှင်သာရိပုတ္တရာ ရဟန်းသည် ဇရာမရဏကို ငြီးငွေ့ခြင်းကြောင့် တပ်ခြင်း ကင်းခြင်းကြောင့် ချုပ်ခြင်းကြောင့် (တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်) မစွဲလမ်းမူ၍ (ကိလေသာတို့မှ) လွတ်ခဲ့မူ “မျက်မှောက်နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်သော ရဟန်း”ဟူ၍ ဆိုထိုက်၏။ ရဟန်းသည် ဇာတိကို။ ဘဝကို။ ဥပါဒါန် ကို။ တဏှာကို။ ဖဿကို။ သဠာယတနကို။ နာမ်ရုပ်ကို။ ဝိညာဏ်ကို။ သင်္ခါရတို့ကို။ အဝိဇ္ဇာကို ငြီးငွေ့ခြင်းငှါ တပ်ခြင်း ကင်းခြင်းငှါ ချုပ်ခြင်းငှါ တရားဟောခဲ့မူ “ဓမ္မကထိကရဟန်း”ဟူ၍ ဆိုထိုက်၏၊ ငါ့သျှင် သာရိပုတ္တရာ ရဟန်းသည် အဝိဇ္ဇာကို ငြီးငွေ့ခြင်းငှါ တပ်ခြင်း ကင်းခြင်းငှါ ချုပ်ခြင်းငှါ ကျင့်ခဲ့မူ “(လော ကုတ္တရာ) တရားအား လျော်သော အကျင့်ကို ကျင့်သော ရဟန်း”ဟူ၍ ဆိုထိုက်၏၊ ငါ့သျှင်သာရိပုတ္တရာ ရဟန်းသည် အဝိဇ္ဇာကို ငြီးငွေ့ခြင်းကြောင့် တပ်ခြင်း ကင်းခြင်းကြောင့် ချုပ်ခြင်းကြောင့် (တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်) မစွဲလမ်းမူ၍ (ကိလေသာတို့မှ) လွတ်ခဲ့မူ “မျက်မှောက်နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်သော ရဟန်း”ဟူ၍ ဆိုထိုက်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
“Này Hiền giả, nếu một Tỷ-kheo thuyết pháp để nhàm chán, ly tham, đoạn diệt già chết, thời đủ để được gọi là vị Tỷ-kheo thuyết pháp. Này Hiền giả, nếu một Tỷ-kheo thực hành để nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, già chết, thời đủ để được gọi là Tỷ-kheo tùy pháp hành. Này Hiền giả, nếu một Tỷ-kheo do nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, vô minh được giải thoát, không có chấp thủ, thời đủ để được gọi vị Tỷ-kheo đã đạt được hiện tại Niết-bàn.”
Posted in Dhamma	| Tagged dependent origination, dhamma, paticcasamuppada
Tết 2019 春节
Posted on3Feb 2019 by Ashin Sopāka
Posted in Calendar	| Tagged 2019, calendar, năm mới, new year, tết, 新年, 春节
Counting Another’s Cattle
Posted on2Feb 2019 by Ashin Sopāka
“Even though reciting abundant scriptures
the heedless one, who does not what they say,
“Even though reciting only few scriptures,
but living in accordance with Dhamma,
the one understanding aright, with mind
released, unattached here and hereafter,
surely partakes of the ascetic life.” Dhp 19, 20
“Bahumpi ce saṁhita bhāsamāno,
Na takkaro hoti naro pamatto;
Gopova gāvo gaṇayaṁ paresaṁ,
“Appampi ce saṁhita bhāsamāno,
Dhammassa hoti anudhammacārī;
Sa bhāgavā sāmaññassa hoti.”
နွားရှင်တို့အား နွားတို့ကို ရေတွက် အပ်နှင်းလိုက်ရသော နွားကျောင်းသားသည် နွားနို့အရသာကို မခံစားရသကဲ့သို့၊ နိဗ္ဗာန်ရောက်သည်အထိ အကျိုးစီးပွါးနှင့်စပ်သော ပိဋကတ်သုံးပုံဟူသော ဘုရားစကားတော်ကို များစွာပြောဟောနေသော်လည်း မကျင့်မကြံ မေ့လျော့ပေါ့တန်နေသောသူသည် ပြုထိုက်သည်ကို ပြုသည်မမည်၊ မဂ်ဖိုလ်အရသာကို မခံစားရ။
နိဗ္ဗာန်ရောက်သည်အထိ အကျိုးစီးပွါးနှင့်စပ်သော ပိဋကတ်သုံးပုံဟူသော ဘုရားစကားတော်ကို အနည်းငယ်မျှပင် ပြောဟောနေပါသော်လည်း တရားအားလျော်သောအကျင့်ကို ကျင့်လေ့ရှိသူဖြစ်ခဲ့မူ ရာဂ ဒေါသ မောဟကို ပယ်ပြီးလျှင် ကောင်းစွာ အပြားအားဖြင့် သိသည်ဖြစ်၍ (ကိလေသာတို့မှ) လွတ်သော စိတ်ရှိသည် ဖြစ်လျက် ဤလောက၌လည်းကောင်း၊ တမလွန်လောက၌လည်းကောင်း စွဲလမ်းမှု မရှိတော့ပြီ။ ထိုသူသည်သာ မဂ်ဖိုလ်အရသာကို ခံစားရ၏။
Không phần Sa môn hạnh.”
“Dầu nói ít kinh điển,
Dự phần Sa môn hạnh.”
Posted in Dhamma	| Tagged conceit, dhamma, māna, practice, pride, study